Uzo nke ubochi: zere ihe mbu nke ojoo | EKPERE NA OZI
Otionbọchị nke ụbọchị: zere nzọụkwụ mbụ na-eme ihe ọjọọ
Paolo Tescione	Edere ya November 15, 2020 November 15, 2020
Chineke mere ka o sie ike. Mgbe mkpụrụ osisi chara acha, ọ ga-adị ka ihe jọgburu onwe ya ịhapụ alaka ụlọ ọrụ. Yabụ maka obi anyị; ebee ka egwu ahụ si abịa, na-ekwe ka oge mbụ bụrụ adịghị ọcha, ịbọ ọbọ, mmehie? Whonye kpọtere nchegharị ahụ n'ime anyị, mkpasu iwe ahụ nke na-ewute anyị ma gwa anyị ka anyị ghara ime ya? - N'ihi gịnị ka o ji fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbalị iji mee ihe ọjọọ na nke mbụ ya? - Chukwu mere ka o sie ike n’ihi na anyị na-ahapụ ya; na ị na-eleghara ihe niile anya ka ịla n'iyi? ...
Ekwensu na-eme ka ọ dị mfe. Agwọ dị aghụghọ maara nke ọma otu esi emeri anyị. Ọ dịghị anwa anyị ọnwụnwa otu ajọ ihe ọjọ; na-eme ka anyị kwenye na anyị agaghị eme omume ọjọọ, na ọ bụ naanị obere mmehie, obere afọ ojuju, mpụta maka naanị otu ugboro, ikwupụtara anyị ya ozugbo, na-enwe olileanya na Chineke, ọ dị mma na ọ na-emere anyị ebere! .., Ma ị kwenyere kama zigara ekwensu okwu kari olu Chineke? Ma gị onwe gị, onye nzuzu, ị hụghị aghụghọ? O kwa i chetaghi mmadu ole dara ada?
Ọ bụ mgbe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Ihu abụọ mbụ, enweghị obi ọcha mbụ, izu ohi mbụ ugboro ole bidoro agbụ nke mmehie, omume ọjọọ, mmebi iwu! Liegha, enweghị nkwanye ùgwù, anya efu, ekpere a hapụrụ, ugboro ole ka mmalite nke ndụ oyi, dị nro, wee bụrụ nke dị njọ! Ndị ọkà mmụta oge ochie dereworị: Kpachara anya banyere ụkpụrụ; na, mgbe mgbe, ọgwụgwọ ahụ abaghị uru ma emechaa. Onye na-eleda obere ihe ga-ada obere obere.
OMUME. Kpachara anya banyere ihe ndị kacha nta n'ime mmehie.
Nke gara aga Post Gara aga post:Na-atụgharị uche taa n’ihe niile Chineke nyere gị, kedụ onyinye gị?
Next Post → Post ozo:Pope Francis: Ilekọta ndị gbara ọsọ ndụ na 'virus nke ikpe na-ezighị ezi, ime ihe ike na agha'